संयुक्त राष्ट्रसंघ पार्कको जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन मन्त्री साहको निर्देशन – ebaglung.com
२०७४ श्रावण २३, सोमबार १८:२५	Top News, थप समाचार
काठमाडौं, २०७४ साउन २३ । संयुक्त राष्ट्रसंघ (यु एन)पार्क काठमाडौं र ललितपुरको सीमानामा पर्दछ । राजधानीको मुटुमा पर्ने पार्कले सहरी सौन्दर्य वृद्धि गर्ने अपेक्षा लिइएको थियो । तर, अहिले पार्कले त्यस अनुरुपको प्रतिफल दिन भने सकिरहेको छैन । पार्कले सहरको सौन्दर्य बढाउनु त परको कुरा आफ्नै स्वामित्वको जग्गा पनि पूर्ण रुपमा उपभोग गर्न सकिरहेको छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ पार्क विकास समितिको जग्गामा कबाडी, खेतिपाती, सुकुम्बासी बस्ती जस्ता समस्या अझै सम्म पनि कायमै रहेको देखिन्छ । सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले पार्कको जग्गमा भएको अतिक्रमण हटाउन यसअघिनै निर्देशन दिनुभएको थियो तर, त्यसो हुन सकेको छैन । समितिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा अझै पनि पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । अहिले पार्क बनेको ठाँउ मात्रै पार्कको जग्गा होइन थप अरु जग्गा पनि पार्कको स्वामित्वमा छ । तर, आफ्नो जग्गामा रहेको अतिक्रमण हटाउन समितिले सकिरहेको छैन ।
सोमबार सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले समितिका पदाधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर पार्कको सौन्दर्य बढाउने गरी योजनाबद्ध रुपमा कार्य गर्न निर्देशन दिँदै यसको लागि पार्कको जग्गामा भइरहेको अतिक्रमण हटाउनु पहिलो कार्य भएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले समिति पार्कको जग्गा खाली गराउन सक्रिय भएर लागेको नदेखिएकाले कडाईका साथ लाग्न निर्देशन दिएका हुन् ।
‘अरुको जग्गा पनि होइन, त्यो जग्गा समितिकै हो ।’ मन्त्री साहले भने ‘आफ्नै जग्गा खाली गराउन पनि तपाँईहरुलाई के को अप्ठेरो ?’ एकीकृत रुपमा मोडेल तयार पार्न जोड दिदै उनले भने, ‘जग्गा खाली भएपछि के गर्ने ? त्यस ठाँउमा के बनाउनु हुन्छ ? तपाँईहरुले त्यो नै देखाउन सक्नुभएको छैन त कसरी जग्गा खाली हुन सक्छ ?’
समितिले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा रक्षा गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । अझै पनि किन खाली हुन सकेन त ? समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीनारायण चौधरी आफूले कसरी खाली गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको र खाली गराउन पत्र काटेको बताउछन् । तर, मन्त्री साह छलफलले मात्रै नहुने भएकाले निस्कर्श निकाल्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘छलफल माथि छलफल कतिन्जेल चल्ने हो स्पष्ट हुनुप¥यो तपाँइहरुलाई निजी घर भत्काउन भनेको होइन, आफ्नो जग्गामा आफ्नो स्वामित्व स्थापित गर्नुहोस् मत्रै भनेको हो’, ‘त्यति पनि गर्न सक्नुहुन्न भने के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?’ मन्त्री साहले प्रश्न गर्दै समितिको जग्गा त्यसरी निजी प्रयोजनका लागि उपयोग भइरहनु नहुनेमा उनको जोड थियो । ‘जग्गा जसको हो उसैले उपभोग गर्न नपाउने पनि हुन्छ ? हामीले अरुको जग्गामा पार्क बनाउनुस् भनेको होइन आफ्नै जग्गा काबाडी लगायतले उपभोग गरिरहेको छ त्यसैलाई खाली गराउन पनि किन समस्या भएको हो ? स्पष्ट हुनुप¥यो ।’
अहिले स्मार्ट सिटी ग्रिन सिटी जस्ता कुराहरुले प्रमुखता पाइरहेको सन्दर्भमा यी र यस्ताखाले पार्कको विशेष महत्व रहन्छ । त्यसैले काठमाण्डौंको सहरी सौन्दर्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ पार्क पनि महत्वपूर्ण छ । खासगरी सहरी सौन्दर्य र प्रदुषण कम गर्नका लागि यस्ताखाले पार्कको महत्व हुने गर्दछ ।